Lizoqulwa ngo-Agasti elokubulawa kukaSithole | News24
Lizoqulwa ngo-Agasti elokubulawa kukaSithole
Johannesburg – Kulindeleke ukuba liqale ukuqulwa ngo-Agasti icala lokubulawa kowesilisa waseMozambique u-Emmanuel Sithole, ngokusho kwaNational Prosecuting Authority.
NgoLwesihlanu umsolwa ongaphansi kweminyaka kuleli cala uvele eNkantolo yeMantshi yaseGoli ephelezelwa amalungu omndeni wakhe.
UMshushisi uJacob Tloubatla utshele iNews24 ukuthi ngemuva kokuvela kafushane enkantolo lo msolwa ongaphansi kweminyaka elingeke lidalulwe igama lakhe ngeke akwazi uklugcinwa esitokisini ngaphezulu kwezinsuku ezingu-14 ngokomthetho.
Icala lakhe libe selihlehliselwa umhlaka 7 ku-Agasti.
Ufakazi kuleli cala naye owabe enetafula lokudayisa emgwaqweni noSithole uFabian Gomes wakwazi ukukhomba laba basolwa abane uMthinta Bhengu, Sizwe Mngomezulu, Sfundi Mzimela nalo msolwa ongaphansi kweminyaka oneminyaka engu-17 ubudala.
OLUNYE UDABA:Baboshiwe abokufika ababulale umfundi ePitoli
Laba basolwa ngokugwaza uSithole emgwaqweni wase-Alexandra ngomhlaka 18 ku-Ephreli.
UGomes watshela inkantolo ukuthi umsolwa ongaphansi kweminyaka owayehambisana nabanye abasolwa wathatha amaphakethe kagwayi etafuleni likaSithole engawakhokhelanga.
Ngemuva kwalokho babe sebeyahamba namaphekethe kagwayi uSithole wabalandela efuna umsolwa ongaphansi kweminyaka abuyise amaphakethe kagwayi.
“Ngesikhathi umufi ebalandela efuna babuyise amaphakethe akhe kagwayi bagcine bemile kwathi oyedwa wabo owabe ephethe ibhodlela likabhiya wamthela ngawo ekhanda,” kusho uGomes etshela inkantolo.
Leli cala kulindeleke ukuba liqale ukuqulwa ngomhlaka 17 ku-Agasti.3